I-iPhone 7 Plus iqala ukuthunyelwa kubasebenzisi | Ngivela kwa-mac
I-iPhone 7 Plus iqala ukuthunyelwa kubasebenzisi
NgoLwesihlanu olwedlule, ngoSepthemba 9, kuvulwe isikhathi sangaphambi kokuthengiswa kwe-iPhone 7 entsha ne-iPhone 7 Plus. Lesi sigaba sizohlala isonto elilodwa emazweni akha igagasi lokuqala lapho idivayisi izotholakala khona. Kuzoba ngoLwesihlanu oluzayo lapho isizukulwane esisha se-Appl esivelele sikhona ngokusemthethweni ezitolo.
Nokho, amanye amayunithi we-iPhone 7 Plus asevele esendleleni eya kubanikazi bawo abasha. I-Apple iyashesha kulo nyaka, mhlawumbe ukusizakala ngamahora aphansi embangi yayo enkulu. Ngakho-ke, kungenzeka kakhulu ukuthi sikwazi ukuya ebhokisini lokuqala lokungabikho ebhokisini ngaphambi kukaLwesihlanu.
1 I-iPhone 7 Plus yokuqala isivele isendleleni egodukayo
2 Wazi kanjani ukuthi i-iPhone yakho "iyasebenza"?
2.1 I-iPhone 7 yokuqala izofinyelela nini kubasebenzisi?
I-iPhone 7 Plus yokuqala isivele isendleleni egodukayo
Ngemuva kokuthi isimo se-oda sishintshe ngokushesha saba ngu "Ready to Ship", igagasi lokuqala lokuthunyelwa kwe-iPhone 7 Plus entsha selivele lisendleleni eya kumakhasimendes. Ukulethwa kwayo kuzokwenziwa ngoLwesihlanu oluzayo, Septhemba 16, usuku lokwethulwa ngokusemthethweni kwamadivayisi amasha. Kodwa-ke, i-Apple ayikasibuyekezi isimo se-oda ukuthi "Kuthunyelwe." Singazi kanjani-ke ukuthi, impela, la ma-iPhones asevele ehamba?
Abanye abasebenzisi sebevele bakwazi ukuthola i-iPhone 7 Plus yabo entsha ku- Iphrofayili yokusekelwa kobuchwepheshe kusuka ku-Apple, kanti abanye bakwazile ukukuqinisekisa ngokulandela ngomkhondo ukuthunyelwa kwe-UPS. Ngokuya ngabakwaMacRumors, bakwazile ukubona ukuthi ama-oda amaningi ayavela kepha noma kunjalo, okungakwazi ukuqinisekiswa ukuthi sezivele zisatshalaliswa ngendlela enkulu.
Kuyadingeka ukuthi uveze ukuthi ukuthunyelwa kwamayunithi we-iPhone 7 Plus esibhekise kuwo kuzokhiqizwa e-United States lapho, njengoba wazi, kuhlale kunenzuzo.
Wazi kanjani ukuthi i-iPhone yakho "iyasebenza"?
Uma usifunda futhi ungumthengi we-iPhone 7 Plus e-United States, ungazama ukuthola ukuthi ngabe idivayisi yakho isivele isezandleni ze-UPS futhi isendleleni eya ezandleni zakho. Ukuze wenze lokhu, kufanele umane ufake umsebenzi «Ukulandelela ngereferensi» ozokuthola ku- iwebhusayithi ye-UPS. Uma usulapho, nje faka inombolo yocingo ehlotshaniswa ne-ID yakho ye-Apple othenge ngalo.
Uma lokhu kungakusebenzeli, ungasebenzisa futhi inombolo ye-oda enikezwe yi-Apple, ngaphandle kwamadijithi amabili wokugcina.
Futhi uma uyikhasimende le-UPS eline-akhawunti ethi "Engikukhethayo", imininingwane yakho ye-oda le-iPhone 7 Plus izovela ngqo ku-akhawunti yakho, ngaphandle kwesidingo sanoma yikuphi ukusesha okungenhla.
Kubathengi Abangewona Ama-US, Njengasendabeni yaseSpain, ungahlola ngokuthinta iphrofayili yakho yokusekelwa kwezobuchwepheshe. Kukhona wonke amadivayisi ahlobene ne-ID yakho ye-Apple. Uma i-iPhone 7 Plus yakho entsha ivela, kungenzeka kakhulu ukuthi isendleleni noma, okungenani, ezandleni ze-ejensi yezokuthutha. Kepha ungazethembi, ukuthi lokhu kunginika ukuthi akuyona isayensi ngqo.
I-iPhone 7 yokuqala izofinyelela nini kubasebenzisi?
Kusukela ngoLwesihlanu olwedlule, ngo-Septhemba 9, ngo-9 ekuseni ngesikhathi sendawo, kungenzeka ukuthenga ku- presale noma iyiphi imodeli yazo zombili i-iPhone 7 ne-iPhone 7 Plus.
Kulesi senzakalo, angama-29 kube amazwe akhethwe ukuhlanganisa leli gagasi lokuqala lokwethulwa: i-United States, i-Australia, i-Austria, iBelgium, iCanada, iChina, iDenmark, iFinland, iFrance, iJalimane, iHong Kong, i-Ireland, i-Italy, iJapane, iLuxembourg , EMexico, eNetherlands, eNew Zealand, eNorway, ePortugal, ePuerto Rico, eSingapore, eSweden, eSwitzerland, eTaiwan, e-United Arab Emirates, e-United Kingdom, e-United States Virgin Islands naseSpain.
Kuzo zonke, Ukuthunyelwa kokuqala akumele kufike ngaphambi kukaLwesihlanu 16. Lolu wusuku olubekelwe ukwethulwa ngokusemthethweni kwamatheminali amasha. Kodwa-ke, kujwayelekile ukuthi iphakethe lifike ngaphambi kwesikhathi obekulindelwe, kungaba ngenxa yokudideka, noma ngoba kuwukunethezeka komuntu olethayo ukuthi angabuyeli endaweni yakho kusasa. Uma lokhu kwenzeka, ngaphambi kukaLwesihlanu sizobe sibona ukukhishwa kwebhokisi lokuqala kwe-iPhone 7 ne-7 Plus.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Apple » Izaziso » I-iPhone 7 Plus iqala ukuthunyelwa kubasebenzisi
Umehluko ongu-10 phakathi kwe-iPhone 7 noma 7 plus nama-iPhone 6s
Ingabe kulula ukulahlekelwa yi-AirPods? Kwakuzokwenzekani-ke?